Global Voices teny Malagasy » Translator Newsletter: Fiteny roa, fandikana hainteny sy ny hafa! · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Jona 2019 18:03 GMT 1	 · Mpanoratra Marianna Breytman Nandika Miranah
Mirary Alatsinainy mahafinaritra ho an'ny rehetra!
Nandritra ny volana vitsy lasa izay, nametraka taratasim-baovao ho an'ny vondrona mpandika teny Espaniôla-Anglisy aho ary vao haingana i Gohary, mpitarika tsy manan-tahotra sahisahy ny Lingua no nanamarika fa mety handray tombontsoa avy amin'izany koa ny vondrona Lingua hafa. Koa ity ary ny lahatsoratra voalohany amin'ny Lingua amin'ny Translator Newsletter! Azonao atao ihany koa ny mijery izany ao amin'ny Community Blog. -
Manampy antsika hahitsy toraka kokoa ve ny fiteny roa?
Pikantsary nalaina tao amin'ny bilaogin'ny Terminology Coordination.
Araka ny voalazan'ity lahatsoratra  ity ao amin'ny Terminology Coordination, ireo olona izay mahay fiteny roa no tsara kokoa amin'ny fanaovana asa maro, fifantohana sy fitadidiana laharan-tarehimarika, sy mitazom-baovao! Ankoatra izany, dia mety hanampy anao hisoroka ny hadalana any aoriana any. Jereo ny lahatsoratra sy ny lahatsary ao amin'ny rohy mba hahafantarana bebe kokoa!
Fanontaniana fito ho an'ny mpahay teny
Pikantsary nalaina tao amin'ny bilaogy ALTA.
Manomboka andiana tafatafa amin'ireo matihanina momba ny fiteny ny ALTA ary natombok'izy ireo tamin'ny Dr. Farooq Kperogi, profesora sy mpanao gazety avy ao Nizeria izany, izay mifantoka amin'ny karazana Anglisy eran'izao tontolo izao. Anatin'ity tafatafa ity i Kperogi miresaka momba izay nahatonga azy ho ao amin'ny sehatry ny fiteny, ho tonga amin'ny tetikasany amin'izao fotoana izao, ary ny zavatra nantsoiny hoe “Glocal English”. Vakio ato  ny resadresaka feno!
Pikantsary nalaina tao amin'ny Asymptote Journal.
“Afaka mandika hatsarana ve ianao raha tsy tsara tarehy izany?” Sue Burke, mpandika teny Espaniola-Anglisy any Madrid, mamakafaka ity fanontaniana ity ao amin'ny lahatsorany farany ao amin'ny Asymptote Journal. Manoratra izy hoe,
“Languages also have different rules for beautiful prose, based both on cultural inheritance and on the possibilities and limits of each language within its grammar and vocabulary.
I translate Spanish to English, and I often face the delightful task of transforming beautiful Spanish prose into beautiful English prose. To do that, I have had to learn to appreciate the standards of beauty for each language, which share little in common due to different historical trajectories.”
Manana fitsipika maromaro koa ny fiteny ho an'ny hainteny mahafinaritra, mifototra amin'ny lova ara-kolontsaina sy amin'ny mety sy ny fetran'ny fiteny tsirairay ao anatin'ny fitsipi-pitenenana sy ny voambolana.
Mandika teny Anglisy avy amin'ny Espaniôla aho, ary matetika aho miatrika asa mahafinaritra amin'ny fanovana ny hainteny Espaniola tsara tarehy ho amin'ny hainteny Anglisy tsara tarehy. Mba hanaovana izany, dia tsy maintsy nianatra nankamamy ny fenitry ny hatsaran'ny fiteny tsirairay aho, izay tsy dia misy ifandraisany firy noho ny lalana ara-tantara samihafa. “
Tsindrio ato  raha te-hahafantatra bebe kokoa ary lazao anay raha mihatra amin'ny traikefa niainanao tamin'ny fandikan-teny amin'ny fiteninao manokana izany.
Mpiara-miasa amin'ny fandikan-teny
Pikantsary nalaina tao amin'ny bilaogy Thoughts translation.
Vao haingana i Corinne McKay, henjana noho ny henjana amin'ny fampianarana ho an'ireo mpandika teny mahaleo tena sy tolo-kevitra momba ny fandikan-teny ho an'ireo izay manomboka ho amin'izany, no nanoratra fa mety ho fanampiana lehibe ny fomba ahafahana manana mpiara-miasa amin'ny fandikan-teninao. Vakio ato  bebe kokoa ary raha manao asa mahaleotena ianao, dia lazao anay hoe – miara-miasa amin'ny olona ve ianao?
Ary izay ny newsletter androany! Toy ny mahazatra, misaotra anareo rehetra noho ny asa mafy ataonareo sy ny fanoloran-tenanareo ho an'ny GV!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/06/21/140384/